Fanondranana entana & fanaterana
Mirotsaka amin'ny indostrian'ny Aluminum & Steel nanomboka tamin'ny 2007, Quzhou Aoyin Metal Materials., Co Ltd dia aluminium & vy mitambatra miaraka amin'ny asa lehibe amin'ny fizotran'ny fanondranana.
Mirehareha izahay amin'ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa nandritra ny 10 taona mahery. Mifantoka amin'ny tsena isan-karazany any Amerika Atsimo, Mid-Atsinanana, Azia, Eoropeana.
Nanolo-tena izahay hanome tolotra ara-potoana sy avo lenta ary vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
ITADY NY VOKATRA TSARA!
Manatitra ny vokatra avy any Chine izahay manerana izao tontolo izao. Lazao anay fotsiny hoe aiza ianao.
Aoyin 6mm takelaka aluminium amidy
Ny takelaka aluminium 6mm dia iray amin'ireo vokatra
5083 mafana rolling cast aluminium takelaka mampiasa
Ny takelaka aluminium 5xxx dia an'ny metaly mahazatra kokoa. Ny singa manan-danja indrindra dia ny magnesium ary ny votoatin'ny magnesium dia eo anelanelan'ny 3-5%. Azo antsoina koa hoe firaka alumini
inona ny fizotran'ny takelaka checker aluminium voapoizina
Angamba efa mahazatra anao ny takelaka checker aluminium. Antsoina koa hoe takelaka gorodona, takelaka fanitso na takelaka checker, ny takelaka diamondra aluminium dia manana endrika diamondra mitsang
3003 O Aluminum Circle ho an'ny fitaovana mahandro
3003 faribolana aluminium ho an'ny cookware dia safidy tsara amin'ny fanaovana vilany tsy miraikitra noho ny endrika tsara sy weldability.
Momba ANAYProductsNEWSDOWNLOADFitetezam-pamokaranaMifandraisa aminay
tsindrio raha hiresaka amiko